China sy ny mpanamboatra fonosana gel mafana sy mangatsiaka | Huanyi
Ny hatsiaka dia afaka mampihena ny fikorianan'ny rà, ny fitsaboana mangatsiaka mampiadana ny fivezivezena, mampihena ny fivontosana, ny hozatry ny hozatra ary ny fanaintainana.
Araho ny rafitra RICE aorian'ny ratra:
HAFA: Mialà sasatra ary aza ampiasaina amin'ny faritra naratra.
Ranomandry: Ice ny faritra naratra faran'izay haingana, io dia manampy amin'ny fampihenana ny fivontosana, ny fandehanan-dra ary ny mangana avy hatrany.
hamintinana ireo: Fonosy amin'ny bandy, matetika mitazona bandy elastika amin'ny kitapo fanampiana voalohany.
Mampiavaka: Arovy ny ratra ambonin'ny fonao mba hampihena ny fivontosana.
Torolàlana amin'ny fampiasana mangatsiaka
Ny fitsaboana mangatsiaka dia atolotra mandritra ny 48 ora voalohany aorian'ny ratra, tsara kokoa ny fitsaboana gilasy avy hatrany.
Tehirizo ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny adiny 2, ny fonosana gel
Ity fonosana gel ity dia azo ampiasaina ho fitsaboana mafana sy mangatsiaka, manaraka ny torolàlana:
Torohevitra fampiasan'ny mafana
Ny fitsaboana mafana dia tsy tokony ampiasaina raha tsy 48 ora aorian'ny ratra.
Aroboka ao anaty rano mafana mandritra ny 10 minitra
Fanamafisana ny microwave
Afana amin'ny heriny manontolo mandritra ny 30 segondra
Previous: Fonosana ranomandry fonosana
Manaraka: fonosana amin'ny lohalika amin'ny fonosana gilasy
fonosana mangatsiaka mangatsiaka
Gel amin'ny famatrarana mangatsiaka mangatsiaka
Fonosana gilasy mafana sy mangatsiaka
fonosana gilasy mangatsiaka mafana
Fonosana gel mangatsiaka mafana
Kitapo gilasy mafana